Umnyhadala Womculo Welizwe: iihektare eziyi-2 ezikwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka edolophini - I-Airbnb
Umnyhadala Womculo Welizwe: iihektare eziyi-2 ezikwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka edolophini
North Tamworth, New South Wales, Australia
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMitchell
Yonwabela phantse iihektare eziyi-2 zobomi belizwe xa utyelela iTamworth kumnyhadala Womculo Welizwe! Qokelela amaqanda kwii-chips zakho, wonwabele i-cuppa kunye nelanga lasekuseni kwi-patio yakho esempuma kunye nento enamandla ngakumbi apho ngokuhlwa. Phola kwipuli ye-10M.
Indawo eyaneleyo (igumbi leendaba, igumbi lokutyela, igumbi le- Řus, igumbi lokuhlala, i-granny yangaphandle kunye ne-patio yangaphandle) kunye neehektare ezi-2 zokuphefumla umoya welizwe ngexesha le-Tamworth Country Music Festival.
* * Elona xesha lincinci unokulihlala ziintsuku eziyi-7 ngexesha lomthendeleko * *
Indawo yakho inkulu ngokwaneleyo ukuba ingahlalisa iqela elikhulu kulo Mnyhadala. Amagumbi okulala ayi-4 (amagumbi okulala amakhulu anendawo yokulala) kunye neflethi enye yangaphandle ye-granny. Sinokubonelela ngomatrasi omnye ukuze undwendwe olongezelelekileyo lubekwe kwigumbi elisetyenziswa ngumntu wonke olikhethileyo.
Ngamanye amaxesha eli iza kuba likhaya lakho ngexesha loMnyhadala Womculo weTamworth Country 2022, eli likhaya lethu losapho ibe sivele nje sikucele ukuba uliphathe ngokungathi lelakho. Uza kufumana izinto zethu kwiikhabhathi, iishelfu zeencwadi kunye neendonga, ngoko sicela ukuba uzihoye zonke izinto uze uzibuyisele kwiindawo zazo zokuqala ukuba zifanele zisuswe.
Siza kuqinisekisa ukuba unendawo eyaneleyo yezinto zakho kwiiwodrophu, kodwa ke nceda uhoye naziphi na izinto zethu ezikhoyo.
Sizifakile izinto zethu - kuquka iincwadi nezinto zobugcisa zaseludongeni - ngoko nceda uhloniphe indlu yethu ngendlela obuza kuyenza ngayo eyakho.
Iyadi yethu ibiyelwe ngokupheleleyo ngoko izilwanyana zasekhaya zamkelekile! Sinepuli ye-10M, ngoko ke ngamaqondo obushushu adla ngokufikelela kumaqondo ayi-40 ngoJanuwari, ipuli ibaluleke kakhulu njengomatrasi ngexesha lokuhlala kwakho edolophini!
Iintsuku eziyi-7 e North Tamworth
Indlu yakho ingaphantsi kweekhilomitha eziyi-5 ukusuka embindini wedolophu ngoko ikwenza ukwazi ukubalekela izihlwele ebusuku ngexesha lomthendeleko uze wonwabele ubumnandi, uhamba nje ngeplanga elifutshane edolophini.
Umbuki zindwendwe ngu- Mitchell
Siza kube singekho kude neTamworth kangangexesha lomthendeleko kodwa ke sinabamelwane nabantu abakule dolophu abanokuxhasa baze bancede xa kufuneka njalo. Sisoloko sifumaneka efowunini xa kukho naziphi na iingxaki ezincinci zezixhobo!
Inombolo yomthetho: PID-STRA-7498